1.523 Mineral Photochromic Brown Optical Lenses-Mineral Lens-Weihai Dingxin Optical Co, Ltd
Blue Kura UV420 Lens
Photochromic Bhenu Inocheka Lens
PC Photochromic Bhenekiti Yakatemwa Lens
Kuroora Kwega Kuroorwa
— —Kupedzwa & Semi Yakapedzerwa Optical Lens
Iwe Uri Pano: Imba>chigadzirwa>Mineral Lens
1.523 Mineral Photochromic Brown Optical Lenses
indekisi 1.523 Density 2.53 g / cm3
Zvinooneka 380 ~ 780nm Abbe 60
Specific Gravity 1.32 kufamba 92%
Abrasion Resistance 6 ~ 8H Lens Ruvara Girinhi
dhayamita 60 / 65 bemhapemha HMC
02. Semi-Yakapedzwa 1.523 Mineral (White, PGX, PBX) Flat-Top Lens
Dingxin Optical yakavambwa muna 1998, Huwandu hwekudyara huri kusvika pamamiriyoni gumi nemaviri emadhora ekuAmerica. Dingxin inovaka nzvimbo inosvika zviuru zvina mazana matatu emamita mativi, vane vashandi vanosvika mazana mazana matatu negumi Kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro ndiyo yedu dhizaini dhizaini. Iyo kugadzirwa kwemhando dzakasiyana dzeresin lens ndeye zviuru makumi maviri nepakati zuva nezuva.
Dingxin iri kushanda pane inoenderera mberi kugadzirwa uye kugadzirwa kweanopenya zvigadzirwa. Huru zvigadzirwa ndeye resin lens uye yekubatanidza lens. Iyo kambani yakapihwa hunyanzvi mukugadzira CR-39, Aspheric foto chromic lens uye 1.56,1.61,1.67,1.74 akateedzana eine resin lens. Zvichakadaro, isu tine akazara maseti eeflautomatic RX zvishandiso kubva kuGerman Satisloh Kambani. Inogona kuburitsa yakatarwa yakatemwa odha yekuraira uye yedhijitari yemahara progressivelens, Chigadzirwa Mhando dzinogona kugutsa zvese zvinodikanwa zvemusika wepasi rose.
Dingxin yakawana ISO9001 uye masitifiketi eEC, Kutengesa rudzi rwemhando lenji mumaguta ese uye maprovince anotenderera, zvigadzirwa zvedu zvinotumidzirwazve kune mutengi! Mune dzimwe nyika nematunhu se: USA, Germany, Mexico, SouthKorea, Turkey, Poland, Brazil, Peru , North Africa uye zvichingodaro.
Tekinoroji yedu inounza mikana yakasiyana-siyana - simbisa kuti iyo kambani inokwanisa kuvandudza nguva dzose, uye vanoona kuti vanhu vakajeka uye vakanyanya kunakidzwa nekunakidzwa kuburikidza nekugadzira dhizaini.
1.Kana iwe uchida samples, isu tichaongorora iyo sampuli mubhadharo uye mutengo wekutumira, uye tichazounza samples kwauri
Mumazuva matatu mushure mekugamuchira muripo.
Kana iwe usingade samples, tinogona kutumira iwo mutengo wenyaya kwauri.
2.Kana iwe uchigutsikana nemasampuli edu kana runyorwa rwemutengo, iwe unogona kutiratidza isu yako yekuraira.
3.Tichaita invoice yeproforma iyo inokuratidza iwo mutengo wese kusanganisira mutero wezvinhu, mutengo wekutakura, saizi lenzi
Uye imwe yeruzivo rwakakosha.
4.Tinotanga isu kuraira kana tagamuchira yako kupambwa, iyo 30% yemari yakazara.
5.Tinoda anenge 15 ~ 40 mazuva ekugadzira odhi iyo kusvika kuhuwandu hwako, uye chengetedza uchivandudza maitiro ekugadzira kuti
6.When patinopedza kuburitsa, isu tinokuzivisa iwe kubhadhara iyo yasara mari.Uye isu tichaendesa kwauri asap kana
Isu tinogamuchira chiyero.
7.Tichapa nhamba yekutevera uye magwaro ekuti iwe ubvumidze pane tsika.
1.56 Photochromic HMC
Wholesale 1.56 resin mapurasitiki epikicha inofamba zvishoma nezvishoma maziso eziso lenzi
Dhizaini inopisa inotengesa imwechete chiratidzo 1.61 yakakwira index photochromic hmc Optical lenses
Adress: No.59, Donghai Road, Eco & Tech Deve Zone, Weihai Guta, 264200 China.
Wire: + 86 631 5991459